Wararkii ugu Dambeeyay ee Ganacsiga Caalamiga- Bogga 3 ee 85 - Alietc.com
Hindiya Pharma Si Loo Joojiyo Ku Tiirsanaanta Shiinaha
Kadib khilaafkii u dhaxeeyey Shiinaha iyo Hindiya ee ku saabsanaa soohdinta bishii Juun 2020, Hindiya waxay diiradda saareysaa isku-filnaanshaha waxyaabaha ka shaqeeya dawooyinka firfircoon (API). In kasta oo uu caan ka ahaa adduunka awood weyn si loo soo saaro dawooyin, haddana Shiinaha waxay dalka siisay kala bar API-ka uu u baahnaa sannadka 2019. Hindiya, sidoo kale, waa inay […]Read More
Taco Bell wuxuu ku biirayaa silsiladda digaagga ee digaagga
Shirkadda makhaayadaha cuntada degdegga ah, Taco Bell, ayaa sii wadi doonta tijaabinta ugu horreysa ee sheyga cusub meelaha sida Tennessee, Nashville, iyo Charlotte. Maaddaama ay tahay shirkadda afraad ee cunnada degdegga ah leh rooti digaag caan ah, oo lagu dhawaaqay bil uun ka hor, Taco waxay u aadi doontaa digaag beddel ahaan hilibka lo'da. Shayga cuntada wuu sii fidayaa kadib […]Read More
Taiwan waxay ballanqaadday inay diiradda saareyso Chips-ka
Dhibaatada caalamiga ah ayaa wali ah dhibaatada gawaarida ay soo food saartay; qaarkood xitaa waa inay yareeyaan wax soo saarkooda. La taliyaha sare ee dhaqaalaha Joe Biden, Brian Deese, wuxuu bogaadiyay dadaalka Wang Mei-hua, Wasiirka Dhaqaalaha Taiwan, ee la dagaalanka dhibaatada. Mar ay ka hadlaysay warqad ka timid Aqalka Cad oo arinta la xiriirta, Wang waxay sheegtay inay la kulantay […]Read More
February 20, 2021 0 comments
Sonkorta Coke Zero Sugar Si Ay U Keento Macaashka Shirkadda
Dhowr sano gudahood, waxsoosaarka sonkorta-eber wuxuu saldhig u noqon doonaa ballaarinta shirkadda Coca-Cola. James Quincey, gudoomiyaha / agaasimaha guud ee shirkada Coca-Cola wareysigiisi udambeeyay wuxuu sheegay in Coke Zero Sugar ay sabab u tahay koritaanka sanadka 2021 iyo laga yaabee sanadaha soo socda. Aad ayey ugu egtahay soodhada Coke, cabitaanka aan sonkorta lahayn ayaa ujeedkiisu yahay inuu sawiro […]Read More
Bosch, Microsoft si loo horumariyo Software-ka Darawalka ah
Shirkadda 'Bosch Engineering Company' ayaa ku dhawaaqday inay la shaqeyneyso shirkadda Microsoft Corporation horumarinta barnaamijyada loogu talagalay gawaarida si ay ugu biiraan wax soosaarka korantada korantada (e-mobility). Shirkaddan oo fadhigeedu yahay Jarmalka ayaa adeegsan doonta daruuriga kumbuyuutar, tiknoolajiyad ku saleysan Microsoft Azure, oo ay la socon doonaan unugyada barnaamijyada ee Bosch. Barnaamijka barnaamijka waxaa lagu tijaabin doonaa gawaarida la xushay dhamaadka sanadkaan. Agaasimaha maamulka Bosch […]Read More
Cold Hinders Soosaarka Saliida Texas
Ka dib markii toddobaad la kasbaday horaantii kalfadhigan qabow dartii, sicirka saliidda ayaa arkay is rogrog bishii Febraayo 18. Brent saliidda cayriin ayaa hoos ugu dhacday $ 64.23 halkii foosto iyo West Texas Intermediate cayriin waxay ku dhacday $ 61.06 halkii foosto. Qabowga aan horay loo arag ayaa sababay inuu istaago ku dhowaad shan meelood meel tirada shiidaalka Mareykanka iyo maqnaashaha [and]Read More
Franchising ma soo kaban doontaa sanadka 2021?
Haddii coronavirus lagu xakameeyo, franchising waxaa la filayaa inay u kobocdo heerarka ka hor faafida cudurka 2021. Sida laga soo xigtay Ururka Caalamiga ah ee Franchise Association, waxaa la filayaa inay jiri doonaan koror ku yimaada tirada goobaha la fasaxay (in ka badan 26,000 ayaa ku soo biiri doonta warshadaha). Shaqada ayaa sidoo kale arki doonta koror ka badan 10% (oo u dhiganta qiyaastii [about]Read More
Bisadu waxay saadaalinaysaa koriin dhowaan
Caterpillar Inc. (CAT) wuxuu isu diyaarinayaa inuu koro sannadaha soo socda. Dhawaan, waxay aragtay heeso wanaagsan oo ay rajeyneyso inay sii dheeraato. Kaydka shirkadda dhismaha iyo qalabka waxay arkeen rikoor sare oo ah $ 203.29 Febraayo 16. Kordhinta qiimaha badeecadaha, horumarka dhismaha, iyo tan ugu muhiimsan, suurtagalnimada […]Read More
Iskotland waxay Japan ku rakibtay Marawaxada Tidal
Scotland waxay soo saartay marawaxad kacsan, oo laga soo geliyay Jasiiradda Naru ee Japan. Sida laga soo xigtay Simec Atlantis Energy (SAE), marawaxada waxay ku guuleysatay inay soo saarto 10 MW saacadood 10 maalmood oo tijaabo ah. Graham Reid, oo ah agaasimaha guud ee SAE, ayaa sheegay in tas-hiilaadku ay yihiin meel loo rogo horumarinta tamarta cagaaran, isagoo intaa ku daray in ay tahay marawaxaddii ugu horreysay ee hirarka badda ee inRead More
Tesla Waxay La Shaqeyn Doontaa India Si Loo Dhiso Xarumaha Korontada Baabuurta
Shirkadda Tesla Inc. waxay ka hirgelinaysaa gobolka Karnataka ee dalka Hindiya wershad baabuurta korontada ku shaqaysa. Tesla, bishii hore, waxay ku midoobeen Tesla Motors India iyo Energy Private Limited xafiis sharciyeysan oo ku yaal caasimadda Bengaluru ee gobolka weyn ee Karnataka, halkaas oo ay ku yaalliin shirkado teknolojiyad waaweyn oo adduunka laga yaqaan. Elon Musk, naqshadeeyaha wax soo saarka Tesla, ayaa muddo dheer ku soo qoray barta internetka ee […]Read More